Jụọ Semalt Ntak emi Cybercriminals Jiri Bots
Oliver King, nke Semalt Onye ahịa Success Manager, na-akọwa na cybercriminals na-eji "bọtịnụ" iji jikwaa kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ. Iji mee nke a, ha ga-abụ akụkụ nke netwọk maka onye na-awakpo ka ị na-ahapụ ha n'ụzọ dị otú a.
E nwere ọtụtụ ụzọ ndị agha nwere ike isi akụ ihe omume bot. Na ụzọ, ígwè ndị a na-ebute nje na-akpọ "bots" ma ọ bụ "zombies." Ụzọ kachasịsịsị mma iji mee ka kọmputa ndị ọrụ na-ebute ọrịa bụ mgbe ị na-eme nchọgharị na ebe nrụọrụ weebụ na-emerụ ahụ. N'ịbụ ndị nọ na saịtị ahụ, usoro "bot" ahụ na-enyocha ọdịmma ya ma jiri ya mee ihe. Ọ bụrụ na ọ ga-enweta ọganihu n'ime kọmputa ahụ, bọtịnụ wee tinye ya. Ụzọ ọzọ bụ mgbe onye na-awakpo na-eziga faịlụ ma ọ bụ email spam na onye ọrụ a chọrọ. Ọzọkwa, ịdị adị nke otu malware na kọmpụta nwere ike inye ndị ọzọ ohere, nke mmemme "bot" nwekwara ike iji nweta ohere.
Ozugbo malware "bot" setịpụrụ onwe ya na usoro ahụ, ọ na - eme ka ị jikọọ na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ nkesa na-enweta ntụziaka maka ihe ị ga - eme. Ihe nkesa na-eziga iwu na nyochaa ihe na-aga n'ihu na botnet, nke bụ ya mere eji akpọ ya na-achịkwa (C & C).
Onye na-awakpo ga-eji ihe nkesa ahụ mepụta ihe omume onye ahịa wee zipu ozi na" bot "iji rụọ ọrụ dị iche iche site na netwọk ọ na-arụ ọrụ ugbu a. otu ma ọ bụ niile bọọlụ na netwọk ahụ. Onye na-achịkwa bụ onye nrụgide, onye ọrụ, ma ọ bụ onye njikwa.
Ndị omekome nwere ike ime
Ngwaọrụ ejikọrọ na botnet adịghị n'okpuru nlekọta ziri ezi nke onye nwe ya, bụ nke nwere nnukwu ihe ize ndụ maka nchekwa nke data na ihe ndị metụtara ya maka ndị n'otu n'otu na ụlọ ọrụ. Enwere otutu ọdịnaya dị nnọọ ka ọmụma ego na nzere nbanye na igwe ọrụ ndị a. Ọ bụrụ na onye na-awakpo na-enweta ntinye azụ na kọmputa site na iji botnet, ha nwere ike iwepụta ihe ọmụma a ngwa ngwa iji merie onye nwe ma ọ bụ azụmahịa.
Ozo ozo maka botnets bu igba mmechi nke nbuso agha na weebụsaịtị. Site n'iji ihe ndi ozo kpokọtara, komputa obula nwere ike iziputa okwua na ebe a ezubere iche n'otu oge. Ọ na-atụgharị ya ruo n'ókè nke na ọ naghị enwe ike ijikwa okporo ụzọ ma si otú a na-enweghịzi ndị na-achọ ya. Ndị na-awakpo ha nwekwara ike iji ihe nchịkọta ego iji zipụ ozi ịntanetị ma ọ bụ malware, na nsị Bitcoins.
Ndị na-eme njem na-azụ ahịa ha n'oge na-adịbeghị anya site n'inwe ọtụtụ "bots" ma na-ere ma ọ bụ na-agbazinye ha ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị ọrụ mpụ bụ ndị na-erite uru nke azụmahịa a ka ha na-eji botnets zoo data, ime aghụghọ, na ndị omempụ ndị ọzọ.
Ihe nwere ike ịkpata nsogbu maka botnet na-abawanye na ọnụ ọgụgụ nke kọmputa ejikọtara na netwọk. Botnets abawanyela ruo ọtụtụ nde "bọọlụ" na-emekarị ka ọ bụrụ na mba ndị ọzọ na-emepe emepe enweta ohere ịntanetị.
Ọtụtụ mba ejiriwo egwu egwu botnet buru oke egwu ma na-arụsi ọrụ ike gụnyere Kọmitii Na-ahụ Maka Nsogbu Mberede Kọmputa (CERT) na ndị ọrụ mmanye iwu na-ewelata ha. Ụzọ kachasị mma iji dozie esemokwu a bụ ịdọrọ ihe nkesa C & C ma belata nkwurịta okwu n'etiti onye nrụgide na "bọtịnụ." Ozugbo a rụzuru nke a, ọ na-enye ndị ọrụ na ndị na-ahụ maka netwọk ohere iji kpochapụ usoro ha ma wepụ onwe ha site na netwọk